Ogaden News Agency (ONA) – Mudaaharaad Ka Dhacay Magaalada Naqemte Ee Gobolka Oromada.
Mudaaharaad Ka Dhacay Magaalada Naqemte Ee Gobolka Oromada.
Waxaa ka dhacay magaalada Naqemte ee Gobolka Oromada mudaaharaad balaadhan oo lagaga soo horjeedo Gumaysiga Itoobiya, mudaaharaadkan ayaa waxaa qabanayay dhalinyarada magaalada oo ka cadhaysan go’doon la galiyay magaalada.
Magaalada Naqemte ayay ciidanka wayaanaha galiyeen go’doon tan iyo intii lasoo rogay xukunka dag daga ah. Shacabka Mudaaharaadka wada ayaa waxay gubeen taayiro magaaada dhexdeeda waxaay shacabku kasoo hor jeedaan ciidamada woyaanaha ee xasuuqa ka wada gobolkooda.
Magaalada Naqemte ayaa waxay kamid tahay goobihii ugu horeeyay ee ka bilawdeen kacdoonka lagaga soo horjeedo xukuumada Woyaanaha, shacabka Oromiya ayaa waxay si wayn uga soo horjeedaan xukunka deg deg ah ee wadanka lagu soo rogay.